Qindaa'inoota fayyadamaan dangaa'an galmee wajjin fe'i
Qindaa'inoota fayyadamaan dangaa'an kan galmee wajjin olkaa'aman fe'a.
Qindaa'inootni Faayilii - Maxxansa - Dirqaalaalee keessatti argaman,
Dirqaalaalee walirraa fageenya keeyyattootaa gabatee barruu dursee,
Odeeffannoo waa'ee haaromsa battalaa hidhootaa, dalagaalee badhee fi taattoo,
Odeeffannoo waa'ee dhangii qubee Eeshiyaa wajjin hojjechuu.
Qindaa'inootni armaan gadii hoggayyuu galmee waliin feamu, dirqalli kun mallattaa'us baatus:
Madda deetaa galmeetti hidhamee fi arga isaa.
Qindaa'inoota maxxansaa galmee wajjin fe'i
Olkaa'uu dursiitii amaloota galmee gulaali
Akka gongeen dhaamsaa Amaloota yeroo hunda ajaja akkasitti olkaa'i filattu mul'atu ifteessa.
Yeroo hundaa dilbii uumi
Odeeffannoo bakkadeebisa ufmaa hunda olkaa'i
Akka LibreOffice galmee banaa bakkadeebisuuf odeeffannoo barbaadame olkaa'u yeroo halakaa ifteessa. You can specify the saving time interval.
Yeroo daqiiqaaleedhaan dirqaala bakkadeebisa ufmaatiif ifteessa.
URLoota sadhaata sirna faayilaatin olkaa'i
Teessoon hirkataa yeroo hunda kan jalqabu galeeloo kan galmeen ammee keessatti argamu irraati. Faallaa isaa, teessessuun of danda'aa kan jalqabu yeroo hundaa galeeloo manataa irraati. Gabateen armaan gadii garaagarummaa syntax wabeessuu of danda'aa fi hirkataa jiddu jiru sitti mul'isa:
Qacceen gargaarsaa yeroo hundumaa daandii of danda'aa agarsiisa. Haa ta'u malee, yoo galmeen gita HTML tiin olkaa'ame, LibreOffice daandii hirkataa yoo sanduuqni filannoo sirrii filatame naqa.
URLs interneetiitti hirkatoo olkaa'i
Duraantaa dhangii faayilii fi qindaa'inoota ODF
Dhangii fooyya'aa ODF
Akeekkachiisa yeroo olkaa'umsa ODF yookiin dhangii durtiin alaa
Ergaa akeekkachiisaa yemmuu galmee dhangii OpenDocument ala olkeessu argachuuf filachuu dandeessa yookiin kan ati dhangii durtii Tools - Dirqaalaalee - Fe'i / Olkaa'i - Dimshaasha keessatti hin taasifne.
Dhangii faayilii isa kamtu akka durtiitti raawwatu yeroo galmeewwan akaakuu garaagaraa olkaa'aman filachuu dandeessa. Yoo galmee kee yeroo hundumaa nama Microsoft Office fayyadamu wajjin wal jijjiirta ta'e, fakkeenyaaf, asitti akka LibreOffice dhangiilee faayilii Microsoft Office qofa akka durtiitti fayyadamu mul'isuu dandeessa.
Gosa galmee kan ati dhangii durtii faayilii qindeessuufii barbaaddu mul'isa.
Yeroo hundaa akkasitti olkaa'i
Akkamitti galmeewwan gosa bitatti filatame yeroo hundumaa akka gosa faayilii kanaatti olkaa'aman mul'isa. Galmee ammeetiif gongee dhaamsaa Akkasitti olkaa'i keessatti dhangii faayilii biraa filachuu dandeessa.